Gbasara Anyị - Huai 'Otu Ihe Nlekọta Ahụike Ahụike Co., Ltd.
Ngwá egwu Orthopedic
Onye na-alaghachi azụ
Ngwá egwu Ophhalmic
Ihe njide agịga
Ngwá ọrụ pụrụ iche
Nrụpụta & njikwa Ogo
Ihe omuma ahia
Hongyu Medical bụ ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa nke etinyebere aka na nrụpụta na ịre akụrụngwa ọgwụ. Kemgbe afọ 2013, ụlọ ọrụ ahụike Hongyu etolite ma rụpụta ihe dị iche iche dị puku abụọ ma kee ọtụtụ agam n’ihu, gụnyere ophthalmology, ịwa ahụ plastik, surgerywa ahụ Micro, Neurosurgery, wdg, nke nwere ike gboo mkpa dị iche iche nke ndị dọkịta.
Iji nwee ike ị glassụ iko nke mbụ, Hongyu Medical na-agbadochi akụrụngwa na-eguzogide ngwa ọrụ dị elu maka ngwa ha, usoro nhazi ọkwa.Ngwuta akụrụngwa dị elu enyere aka iji hụ na izizi na ike nrụpụta ike nke akụrụngwa ọgwụ niile, iji wee belata ọnụego nrụpụta n'otu oge, nyocha a na - adị oge niile n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro mmepụta ọ bụla site na ihe wee ruo na njedebe. ngwaahịa.
Ahụike Hongyu njikwa mma Emebere ngalaba iji nyochaa nnabata ngwa ọrụ ọ bụla, gụnyere ọdịdị, nha, nkenke, na ngwugwu. Nyocha niile ga-adịrịrị dị ka obodo dị n'okpuru ya na ụkpụrụ nke ime ya, chọrọ ndị ahịa ahịa pụrụ iche. Ọ kachasị maka mkpa ndị ahịa chọrọ nke iwu, ndị ọrụ njikwa ọrụ na-ewekarị nkọwa dị omimi, iji mezuo mkpa nke ndị ahịa kpamkpam. N'ụzọ dị otu a ngwa ọrụ ọ bụla sitere na Nrụpụta Ahụike Ahụike bụ ihe ndị ahịa anyị na-atụ anya ya. A ga-ahụta dị oke mkpa nye anyị, dị ka ọkachamara OEM / ODM ọkachamara na China.
Ka ọ dị ugbu a, Ngwá Ọrụ Ahụike Hongyu etinyela aka na ngwa ophthalmic, akwara ịwa ahụ plastik, akwara ịwa ahụ, akwara Neurosurgery, gụnyere ihe ọkpụkpọ Orthopedic, Forceps, Tweezer, Elevator Instruments, ndị na-alaghachi azụ, ihe na-apụ apụ apụ apụ, ihe ndị na-apụ apụ apụ, ndị na-eji agịga, akụrụngwa ndị ọzọ pụrụ iche, ect.
Iji mee ka ndị ahịa nweta ngwaahịa na ọrụ dị mma, anyị ewepụtala mmekọrịta dị n'etiti ndị ụlọ ọrụ ahụike ama ama na ụlọ na mba ofesi. Ogologo oge a na nnukwu nkwado a na-enyere aka maka ngalaba ọrụ ahụ ike Hongyu nwere ike ịzụlite ngwa kwesịrị ekwesị karịa nke ndị dọkịta ma ọ bụ ụlọ ọrụ metụtara ahụike.Ofụt, Hongyu Medical anọwo na-edebe usoro okike iji mepụta ngwa ọhụụ iji zụọ ahịa dị ka mkpa nke ahịa si dị. .
Companylọ ọrụ ahụ abụghị naanị na-elekwasị anya na ihe ọhụụ na teknụzụ, na-arụ ọrụ na nyocha nke ụlọ ọgwụ n'ọtụtụ ma na-azụlite ngwaahịa nwere ike ịnwepụta nke ndị dọkịta mepụtara, mana na-ejikwa ịnụ ọkụ n'obi na-akwado mkparịta ụka agụmakwụkwọ ọkachamara dị iche iche, ka ndị dọkịta na-eto eto nwee ike inweta ọzụzụ ịwa ahụ na ọzụzụ usoro ọzụzụ, na ahụmịhe ndị ọzọ nwere ahụmahụ. ndị dọkịta nwere ike ịnọgide na-aka mma. Nke a bụkwa nka nke ụlọ ọrụ.
Ọgbọ na-eto eto nke Hongyu Medical ga-aga n'ihu na-ewetara ndị dọkịta ngwaahịa na ọrụ dị mma karịa dabere na tenet nke onye guzobere.
KPI njikwa mma (isi arụmọrụ igodo):
1.Mat. Ihe akụrụngwa nke akụrụngwa Hongyu ga-adịrịrịrị na ọkọlọtọ GB / T1220-2007 na GB / T3620.1-2016.
2.Sizes ndidi. Ogo ndidi nke akụrụngwa nke Hongyu kwesịrị ịdị na-erughị ogo a na-egosi na eserese ọkọlọtọ.
3. smoothdị elu dị larịị. Igwe ahụike dị na Hongyu niile ga-adịrịrị 0.8µm. Ekwesiri ị hụ ọdịdị ahụ.
4.Ọle ule.A ga-arụrịrịrịrị ule ahụ dika ọkọlọtọ GB / T230.1-201.
5.Anti-corrosion nnwale.A na-eji nnwale mmiri na-agba mmiri mgbe niile dị ka ọkọlọtọ YY / T 0149-200
Dị ka anyị maara, njikwa njikwa siri ike bụ ihe ndabere nke ngwá ọrụ dị elu. Hongyu Medical ejirila nkọwa ngwaahịa nke ngwaahịa niile ma mee ka obi sie ndị ahịa ike na ngwa ọgwụ.
Otu ngwa ahia bu:
1. productdị ngwaahịa ahụike Hongyu na-ekpuchi ngwa ịwa ahụ plastik, akwara ịwa ahụ, akụrụngwa akwara, ụlọ akwara ozi, wdg.
2. companylọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na ọrụ mmepe ngwaahịa ọhụrụ, na imepụta atụmatụ ọrụ mmepe dị ọhụrụ, ma na-agba mbọ imepụta na arụmọrụ nke ọgbọ mbụ nke ngwaahịa n'otu oge, ma na-arụsi ọrụ ike n'ọgbọ nke abụọ. , nyocha ọgbọ nke atọ, echiche nke ọgbọ nke anọ, iji hụ na enwere ahịa ngwaahịa ọhụụ na-aga n'ihu, nke mere na ụlọ ọrụ dị na usoro mmepụta na usoro ọrụ niile iji nọgide na-agbasi ike, ma na-achọ mmepe mgbe niile.
E gosipụtara ezigbo mma nke ngwaahịa a:
Teknụzụ na-emepụta ihe, site na ijiji igwe, ịkpụzi ihe, na-ete aka, na mpempe akwụkwọ, ịgbado ọkụ na mgbakọ, nnwale, nwere usoro zuru oke. Na ngwa eji akara akara ụlọ dị n’ụlọ, ihe eji akpụ akpụ na akụrụngwa nnwale, na-enwe ike nrụpụta na imepụta ya.
Ọrụ Ahịa Azụmaahịa Hongyu
Huai'an City Hongyu Medical Devices Co., Ltd dị ka ụkpụrụ "aha mbụ, iguzosi ike n’ezi ihe" si dị, mere nkwa ndị a:
1.Pkesa ozi ihe omuma, ihe omuma nka;
2.N'ihi ikike, enyere aka doti, mgbe nsogbu ndị a mere dị nwute na maka ngwa anyị n'ihi ọghọm mmadụ na-abụghị, a ga-edochi ngwa ndị ahụ na akwụghị ụgwọ;
3. Azịza n'ime 24hrs maka ajụjụ ọ bụla. A ga-anabata arịrịọ gị ọ bụla n’ime awa iri abụọ na anọ mgbe ịzitere anyị arịrịọ anyị na saịtị anyị.
Oge nnyefe 4.Fast. Dịka ọ dị, aga-ebugharị ihe nlele gị n'etiti 48hrs.
5. Soro anyị ma hapụ ozi oge ọ bụla:
Otu Ndị Ahịa
Maka ajụjụ gbasara mmelite anyị, biko hapụ email gị ka anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24.